Kwesibeletho ngezwi yini ukwenza ekhaya
Ngamunye wobulili bubuhle okungenani kanye yehlelwa isimo lapho lenyuka lesizalo ithoni. Yini angayenza kulesi simo, kudingeka wazi zonke wesifazane. Yazi isimo esinjalo kungaba kokubili izigaba sokuqala sokukhulelwa, futhi nje ngaphambi kokuzalwa. Kungenzeka futhi overvoltage imisipha lesizalo futhi ngaphandle sokukhulelwa.
Kwesibeletho isesimeni esihle
Okufanele ukwenze Kulokhu incike esimweni ngokushesha zomama. Kukhona imisipha eziningana ezinkulu amandla isimo lesizalo:
Hypotonia. Kulokhu, kwesibeletho itholakala esimweni esikhululekile kakhulu, ukuthi akuyona into evamile.
Normatonus. Imisipha kulokhu esimeni sayo esivamile.
ithoni Eliphakeme. Kwenzeka ngesikhathi sokukhulelwa futhi kungabangela isisu nokuguqulwa.
Hypertonicity. Isimo ezivukayo ngesikhathi kuqala zomsebenzi nokuqhubeka ubude babo.
Kaningi odokotela ukubeka abesifazane abakhulelwe ukuthi nginesifo lesizalo hypertonicity, kodwa lokhu akulona iqiniso ngokuphelele. umama okhulelwe kungaba ithoni ephakeme, kodwa hypertonia kakade uba nemihelo noma ukuphuphuma.
Esimeni anda lesizalo ithoni nakho abakhulelwe elandelayo zako:
Cramping ubuhlungu esiswini.
Ukudweba kabuhlungu emgogodleni lumbar.
Ukopha kusukela emgudwini wokuzala.
Uma ubona noma yiluphi uphawu lesi sifo esiphuthumayo ukubona udokotela, kodwa abesifazane abaningi bakhetha ukuzithiba medicate.
Kwesibeletho e ithoni (lokho ukwenza ekhaya)
Ngakho lapho ubhekene uhlobo esiswini ekukhulelweni ekuseni. Yini angayenza kulesi simo? Imiphi imithi ingase ikhishwe ngaphandle udokotela?
Okokuqala, kungase ithoni kubangelwa ukuzikhandla ngokweqile noma esimweni esicindezelayo. Kulokhu, udinga ukuthatha valerian noma motherwort uyolala.
Zama uphumule futhi ungacabangi ngenkinga. Cabanga ukuthi maduze uzothola nengane yakho, thatha wamgona futhi yayicindezele esifubeni sakhe. Ngubani impilo yakho kanye nesimo psycho-ngokomzwelo ibaluleke kakhulu kuye, ngakho zama hhayi ukuba sezinzwa futhi ukugwema izimo ezibangela ukucindezeleka.
Ukuhlehlisa imisebenzi yasekhaya nomsebenzi uphumule. Ungeqisi it, futhi ngokuqinisekile ngeke wahlanganyela emisebenzini yezandla kungakwenza esindayo.
Uma kwesibeletho isesimeni esihle, yini okufanele uyenze ngokungabi bikho izidakamizwa? Abaningi abazi izintokazi wayekujabulela lokhu zokupheka of imithi yendabuko. Omunye wabo - ukusetshenziswa kuphuma amafutha anephunga elimnandi.
Uzodinga uwoyela kakolweni lwegciwane njengoba isisekelo. It has cishe akukho iphunga, lokhu inzuzo yayo. Ukuze base kuyadingeka ukuze ungeze ambalwa amathonsi uwoyela Mandarin ngisho kancane uwoyela rose.
Govuza unama okuholela futhi silisebenzise entendeni. Thatha ovundlile futhi ngobumnene uhlikihla esiswini sakho aphansi. Ngenxa ukukhanya kuwukuziphulula umzimba wakho ukhululeke, nephunga lamafutha kuzosiza ukuzola bese uvula ngendlela enhle.
Uma isimo esikhululekile futhi lonke musa asize, futhi kukhona izinto ezifana nokukhulelwa asathuthuka, ithoni lesizalo. Okufanele ukwenze kuleli cala?
Thatha enye esibhebheni "Cha-spa." Lesi sidakamizwa ingasiza ekudambiseni izinhlungu zibe futhi uphumule odongeni lesizalo. Ungase futhi usebenzise "papaverine". Lokhu nomuthi ekhiqizwa e umjovo kanye suppository. Ukuze isetshenziswe ezizimele makudle lakamuva. Faka eyodwa kwekhandlela ingemuva uyolala.
Ngokuvamile, lezi zenzo ukusiza lapho kwesibeletho abakhulelwe isesimeni esihle. Yini okufanele Angazi uma lokhu kungasebenzi, bese uqala ukubeka amabala?
Ukuswelakala kokusebenza ngokuhlanganyela progesterone
Ngezinye izikhathi ekuseni ekukhulelweni umama okhulelwe kukhona ukuntuleka progesterone. Kuyinto le hormone esiza imisipha lesizalo kukhona normatonuse. Uyanikela ukuqhubeka ukukhulelwa. Uma hormone akwanele, isibeletho siqala ukufinyela qinisa futhi ithoni beze. Kulokhu, eyodwa kuphela indlela yokuphuma - ukuze uthole progesterone eyayenziwe.
Odokotela bavame izidakamizwa umama okhulelwe "Djufaston" noma "Utrozhestan". Isikali kumele ngamuntu munye, yingakho ukuya kudokotela futhi akazibekanga medicate.
Tonus esikhathini ngasekupheleni yokukhulelwa
Uma kwesibeletho kukamama esizayo isesimweni esihle, yini okufanele uyenze? Kumaviki awu 30 ubhekwa isikhathi emnceleni. Kusukela ngaleso sikhathi ingane ibelethwe ngaphambi kwesikhathi, kungase kudingeke ukuba basinde ukunakekelwa neonatologists onekhono.
Kodwa, naphezu kwalokhu, ukuvela ukwelashwa ephezulu ithoni wenziwa waze wabeletha. Ngo eside enjalo nesineke ngokuvamile afakwe esibhedlela ngaphezulu zokuqapha ngokucophelela esimweni saso, lapho bachitha khona ukulungiswa yezokwelapha ezidingekile ke.
Ekhaya nemibandela efanayo ukusebenzisa isidakamizwa "Genipral". Ngeke athathwe okwakuhlalwa kuzo lapho kusaqalwa, kodwa lubaluleke ithoni lenyuka ngemva kwamasonto angu-30.
A ngamanzi afudumele kubhavu noma eshaweni
Kaningi ngaphambi kokuzalwa esizalweni abesifazane e ithoni. Okufanele ukwenze kuleli cala?
Abanolwazi obelethisayo-gynecologists ukuncoma umama okhulelwe ukuthatha ngamanzi afudumele kubhavu noma eshaweni. Yiqiniso, lokhu kufanele kwenziwe ngokungabi bikho Izimo. Gcwalisa a okugeza amanzi nge ukwengeza Foam ozithandayo futhi amanga kancane phansi kulo. Amanzi afudumele kuzosusa ukungezwani muscle ukukusiza uphumule.
Uma kungekho kungenzeka ukuthatha okugeza, ungakwazi engqondweni, ube eshaweni efudumele. Yima ngaphansi yamanzi futhi uphumule. Cabanga okuhle, pussycat kwesisu kanye ukukhuluma kid.
Lapho ngiphuma emanzini okugeza, qaphela ukuze agxumele njalo.
Ngokuvamile, lokhu kwenzeka ekuqaleni yokubeletha. Ekhaya nabo kuyize ukulwa, futhi ukuthi kunesidingo esiphuthumayo shayela i-ambulense. Ikakhulukazi uma ukungezwani kwemisipha kuhambisana ukopha. Kulokhu, ungase usongo empilweni yakho.
Hypertonicity kuyinto esimweni esejwayelekile uma kuziwa ngemva kwamasonto 38 sokukhulelwa ingane. Ngalesi sikhathi umntwana kubhekwa umnyuziki eside, futhi kungenzeka kahle azalwe. Tune in lokhu kwakuyoba nomphumela omuhle, bese uya esibhedlela womama emhlanganweni eside elindelwe.
ithoni kwesibeletho hhayi abakhulelwe
Uma owesifazane ebamba akunakwenzeka, kodwa kwesibeletho sowesifazane isesimeni esihle, yini okufanele uyenze? Ngaphandle sokukhulelwa nale nkinga ukulwa lula kakhulu, ngoba ezidunjini ezomisiwe esizayo akufanele bathathe imithi kakhulu.
Uma ungeyena ukhulelwe, kodwa kukhona voltage of lesizalo imisipha ke lokhu kungaba isiqalo ngenyanga ezayo. Uma ukungakhululeki ezinzima, ungakwazi ukuthatha noma yisiphi antispasmodic futhi uphumule kancane. Ngokuqinisekile, le ndlela kususa ukungezwani.
Abesifazane abaningi abazi ukuthi sibhekene efanayo inkinga, uvalo bese uyathetha: "Lo kwesibeletho isesimeni esihle! Yini okumelwe uyenze? Hhayi ukhulelwe - lokho ngokuqinisekile ". Odokotela ukuphendula lo mbuzo kuyafana: "Akukho lutho akudingeki, uma akakubangeli izinhlungu nokuphatheka kabi."
Kufinyeta, singaphetha ngokuthi nge ithoni kwesibeletho angase abhekane yimuphi owesifazane, kunoma yisiphi isigaba bekhulelwe noma ngisho ukungezwakali kwawo. Ungethuki futhi uthole novalo, kungaba kuphela babhebhethekisa lesi simo.
Ziningi ezahlukene zokwelapha ithoni, kodwa ngokuhle kunakho konke kwawo - kuyinto zokuvimbela. Uma ukhulelwe, ukubukela impilo yakho, musa babonisa. Thatha amavithamini ezidingekayo namaminerali ebekwe udokotela. Indlela Great iphimbo lokuvikela edonsa amavithamini B6 iqembu. Khuluma nodokotela wakho futhi uthole ukuthi ungakwazi ukuvimbela ithoni.
Ukuze ubone ukuthi lokhu akwenze ngokunemba khona noma ukungabi khona anda lesizalo imisipha ithoni kungaba onguchwepheshe usebenzisa umshini ultrasound. Ngakho-ke, i-okuyikona kufanele uxhumane nodokotela wakho futhi musa ukuba bazikhethele bona ukuthi umbuzo ekwelapheni.
"Molimed" (spacers): incazelo kanye nokubuyekeza
Alopecia kwabesifazane: lwezinhlobo ezivame kakhulu nokwelashwa
Nginga imbewu ibele futhi kungakanani?
Ukudala kanye biography of Edward Asadov